Public Health in Myanmar: January 2010
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်က အစ်မတစ်ယောက်ဆီက email တစ်ခုရလို့ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ India မှာ HIV positive needle တွေ ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ မြှုပ်ထားလို့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ အပ်ဆူးကုန်ကြတဲ့ သတင်း ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါနဲ့ အများသိပါစေဆိုပြီး ဘာသာပြန်ပြီး public health in myanmar ရယ်၊ new world ရယ်၊ ကျွန်တော့် blog မှာရယ် တင်ပေးလိုက်တယ်။ ဒီနေ့ရောက်တော့ PHIM member တစ်ယောက် ပေးတဲ့ link ကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့မှ အဲဒီသတင်းက အစစ်အမှန် မဟုတ်ဘဲ အင် ကြီး ဖြစ်နေတာ တွေ့ရတယ်။ အဲဒါကြောင့် HIV ထက်ကြောက်စရာကောင်းသောလူများ post ကို ဖယ်ရှားထားလိုက်ပါတယ်။ စာဖတ်သူအားလုံးကို စိတ်အနှောက်အယှက်ပေးမိပါက တောင်းပန်ပါကြောင်း....။
အောက်ပါ link များမှ တဆင့် အဆိုပါ email အကြောင်းကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Posted by ဇီဝက (ဆေး-၂)6comments
လိင်ဆက်ဆံရာမှာ ပါးစပ်ကို အသုံးပြုတာက သိပ်မဆန်းတော့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုနည်း လုပ်ပါ-မလုပ်ပါနဲ့လို့ ပြောဘို့က ဆရာဝန်တွေအလုပ် မဟုတ်ပါ။ သတိထားစရာတွေ မလုပ်မိရင်တော့ ရနိုင်တဲ့ ရောဂါတွေ ရှိပါတယ်။ အများသိကြတဲ့ STD လို့ခေါ်တဲ့ လိင်ကတဆင့်ရတဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေပါ။ ဒီရောဂါတွေ အကြောင်း အကြမ်းဖျင်းလောက်ဘဲ ဒီနေရာမှာ ရေးပါမယ်။ STD ဆိုတာ လိင်ဆက်ဆံရင်းနဲ့ ရောဂါပိုးရှိနေသူဆီက သူ့အဖေါ်ကို ကူးစက်စေတဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင် အမျိုးမျိုးက နေရာအမျိုးမျိုးမှာ ဖြစ်တယ်။ နေရာဆိုတာ ထိစပ်မှုရှိတဲ့နေရာတွေပါ။ ကျား-မ လိင်အင်္ဂါတွေ ဆိုတာတော့ မပြောစရာ မလို့ဘူးပေါ့။ သမားရိုးကျ မဟုတ်တဲ့ နေရာတွေကတော့ စအို နဲ့ ပါးစပ်။ ဒီနေရာတွေကိုလဲ အသုံးချလို့ ဖြစ်ရတာပါ။ အမှတ် (၁)ကို စအိုအကြောင်းနဲ့ စခဲ့ပါတယ်။ အခု ပါးစပ်နည်း ရေးပါတယ်။
၁၉၉၈ ကတည်းက စဉ်တိုက် ဆက်တိုက် အခန်းပေါင်း ၉၄ ခုအထိ ပြသခဲ့တဲ့ Sex and the City ဆိုတာက အတော် နာမယ်ကြီးပါတယ်။ HBO ကနေပြတာပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ STDs လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ၊ Safe sex စိတ်ချရတဲ့ လိင်ဆက်ဆံရေးနဲ့ Promiscuity အမျိုးမျိုး အထွေထွေသော နည်းတွေ ဆိုတာတွေပါတယ်။ ကနေ့ကမ္ဘာမှာ ဆူပါနေရာ ရောက်နေတဲ့ အမေရိကဆိုတဲ့ တိုင်းပြည်၊ ရှေ့မှာပြေးနေတဲ့ နယူးယောက်ဆိုတဲ့ မြို့တော်၊ သူ့ရဲ့ ထိပ်တန်းရပ်ကွက် (မင်ဟတ်တန်) က ရေပေါ်ဆီအလွှာခေါ်မဲ့ Big-city professional women တွေရဲ့ လူမှုဘဝထဲက လိင်မှုဘဝတွေကို ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း ဖေါ်ပြထားတာပါ။ ကျွန်တော့်တို့ဘ၀ကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပါဘဲ။ ဒါ့ကြောင့် နေရာတကာမှာ သွားတူချင်လို့ မရပါ။
ရောဂါပိုးတွေက သွေးတို့၊ (လင့်ဖ်) တို့အပြင် ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ် အရည်တွေထဲမှာလဲ နေကြတယ်။ ဆက်ဆံတဲ့အခါ နှစ်ယောက်လုံးကနေ အရည်ဆိုတာမျိုး ထွက်ပါတယ်။ သွားရည်ထဲမှာ ဒုက္ခမပေးတဲ့ ပိုးတွေ ရှိနေတယ်။ သာမန်အရေပြား ဆိုတာက ကောင်းနေရင် ရောဂါရစေတဲ့ပိုးတွေ အလွယ်တကူ ဝင်မလာနိုင်ဘူး။ အနာအဆာရှိရင်တော့ ဝင်လာနိုင်တယ်။ သတိထားဘို့က ကောင်းနေတဲ့ လိင်အင်္ဂါကိုဖုံးထားတဲ့ ပါးလွှာလွှာအရေပြားဟာ ဆက်ဆံရင်းနဲ့ သေးငယ်လှတဲ့ ဒဏ်ရာလေးတွေ ရတတ်တယ်။ မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်အောင် ငယ်လွန်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ မှန်ဘီလူးနဲ့ ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်မှ မြင်ရလောက်အောင် သေးတဲ့ ရောဂါပိုးတွေအတွက်တော့ အဲဒီဒဏ်ရာလေးတွေက လမ်းကျယ်ကြီးတွေလို ဖြစ်နေတာမို့ အထဲဝင်လာနိုင်တယ်။
အကြံပေးတာတခုက ဒီပါးစပ်အသုံးပြုနည်းကို သုံးချင်ရင် အကာအကွယ် လုပ်ဘို့ဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ပါးစပ်နဲ့ အဖေါ်ရဲ့အင်္ဂါကို တိုက်ရိုက် မထိတွေ့စေအောင် အဖုံးသုံးခိုင်းတာပါ။ ကွန်ဒွန်လိုဟာ ဖြစ်ပါတယ်။ Barrier Methods ခေါ်ပါတယ်။ Saran or Cling Wrap လို့ခေါ်တဲ့ ပလပ်စတစ်ကိုလဲ သုံးနိုင်တယ်။ ချောစေတဲ့ဆေး မပါတဲ့ Non-Lubricated Condom ဖြစ်ဖြစ် Flavored Lubricated Condoms ဖြစ်ဖြစ် Kiss of Mint Condoms ဖြစ်ဖြစ်ကို သုံးနိုင်တယ်။ ပြည့်စုံအောင်ထည့်ရေးရရင် Gay တွေအတွက် Dental Dams တွေကို အသုံးခိုင်းတယ်။
တလောက မေးတာတခုရှိတယ်။ “သုတ်ရည်ပါးစပ်ထဲ ဝင်မိသွားရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သလား” တဲ့။ မရပါခင်ဗျား။ လက်ခံသူမှာ HIV နဲ့ B ပိုး ရှိနေပြီး၊ လုပ်ပေးသူရဲ့ ပါးစပ်မှာ အနာအဆာရှိရင်၊ ဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ ပါးစပ်သုံးနည်းကို ကိုယ်ဝန် မရှိအောင် ဆက်ဆံနည်းအဖြစ် သုံးနိုင်သလို အင်္ဂါနှစ်ခု တကယ်ထိတွေ့မှု မလုပ်ခင် Foreplay before intercourse အဖြစ်လဲ သုံးလို့ ရပါတယ်။ လစဉ်ရာသီဆင်းချိန်မျိုးမှာလဲ Alternative အဖြစ်သုံးနိုင်သေးတယ်။
ဆန့်ကျင်သူတွေ အယူခံဝင်တာကတော့ ပါးစပ်နည်း Oral sex ဟာ ပါးစပ်ကင်ဆာ Oral cancer ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်တဲ့။ New England Journal of Medicine ရဲ့သုတေသနတခုက ဆိုတာကတော့ တသက်တာမှာ ပါးစပ်နည်းသုံးတဲ့အဖါ် ၅ ယောက် အထိထားသူများဟာ Throat cancer လည်ချောင်းကင်ဆာ ဖြစ်ဘို့ ၂ ဆလောက်ရှိတယ်တဲ့။
၁ဝ။ အဲလိုမဟုတ်ရင် ကွန်ဒွန် Condom သုံးပါ။
ကွန်ဒွန်သုံးတာဟာ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှု မဟုတ်လို့ သာယာမှု နည်းတယ်ဆိုတာ စိတ်ပါ။ အရွယ်ရှိသူများမှာ ဟော်မုန်းတွေ ရှိနေလို့ လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ် အမြဲကိန်းအောင်းနေပါတယ်။ “စိတ်ကစားမှု” ကနေ ဆန္ဒ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ “အထိအတွေ့” ရှိလာရင် ဆက်ပြီး စခန်းသွားချင်လာတယ်။ အထိအတွေ့မှာ သာယာတာဟာ စိတ်ကြောင့်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်နှစ်ဦး လက်ချင်း ထိမိတာတောင် လိင်စိတ် နိုးထတတ်တယ်။ တချို့က မျက်စိချင်း ဆုံတာနဲ့ မေတ္တာ သက်ဝင်တယ် လို့ ပြောကြတယ် မဟုတ်လား။ စိတ်ပါဘဲ။ လူနာတယောက်ကို ထိကိုင်၊ စမ်းသပ်တဲ့အခါ အဲလိုစိတ် မဝင်အောင် ထားတတ်တာက ခိုင်မာတဲ့စိတ်၊ ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းသူများမှာ အဲလိုစိတ်ကို ထိန်းနိုင်တာတို့ဟာ သန့်ရှင်းတဲ့စိတ်ပါ။ လိင်တူကို စိတ်ဝင်စားတာကလဲ ဆန်းပြားတဲ့စိတ်။ ဆေးပညာအရ စိတ်အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ သတ္တိဟာ ဟော်မုန်းတွေ အချိုးအဆကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဟော်မုန်းရဲ့ အထက်မှာက “ထိန်းလို့ ရတဲ့”၊ “လွှတ်လို့ လွယ်တဲ့” စိတ်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။
လိင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်တာ ပုံမှန်ပါ။ နည်းစမ်းချင်တာလဲ (နော်မယ်)ပါ။ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အတိုင်း စမ်းချင်တဲ့ နည်းကို ကာယကံ မြောက်တော့မယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးပညာပေးတွေနဲ့ ချင့်ချိန်ပါလေ။
Posted by Dr. Tint Swe 32 comments
Labels: Health behavior, Lifestyle
Posted by ဇီဝက (ဆေး-၂)2comments
HIV နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထပ်တင်ပေးမယ့် စာအုပ်ကတော့ Unicef နဲ့ World Vision တို့ စုပေါင်းပြီး ထုတ်ဝေတဲ့ " ဘ၀အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်" ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။ HIV ပိုးရှိသော လူတွေကို ဘယ်လို ဆက်ဆံသင့်သလဲ ဆိုတာကို အဓိက ထားပြီး ရေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ မူရင်းစာအုပ်ကတော့ Unicef ကထုတ်ဝေတဲ့ With Hope and Help ဆိုတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါ Link မှ တဆင့် download လုပ်လို့ ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ A/H1N1 တုပ်ကွေးရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုသည် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အခြေအနေမရှိတော့ကြောင်း ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက The Voice Weekly သို့ ပြောကြားသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ A/H1N1 တုပ်ကွေးရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေများကို လေဆိပ်၊ နယ်စပ်ဝင်ပေါက်၊ ထွက်ပေါက်များနှင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများ ပုံမှန်အတိုင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ လက်ရှိလူတုပ်ကွေး ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေမှာ လျော့ကျလျက်ရှိပြီး စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အခြေအနေမဟုတ်တော့ကြောင်း၊ ရောဂါကူးစက်မှုကို ဂရုစိုက် စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုရမည့် အခြေအနေ၌ သာရှိတော့ကြောင်း၊ အခြားနိုင်ငံများ၌လည်း အေတုပ်ကွေး ရောဂါ ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေမှာ လျော့နည်းကျဆင်းလျက်ရှိကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ လူတုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားရခြင်းမှာ ပြည်ပမှ ပြန်ရောက်လာသူများမှတဆင့် ကူးစက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိအခြေအနေတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၀င်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံခြားသား များပြားလာသော်လည်း ဖျားနာသူ ပါဝင်မှုမှာ နည်းသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ ဖျားနာသူ ပါဝင်မှုနှုန်း လျော့နည်းကျဆင်းသွားခြင်းမှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ မတိုင်မီမှစ၍ လျော့နည်းသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကျန်းမာရေး ဌာနတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
လက်ရှိအခြေအနေအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူတုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ဖြစ်ပွားသူ ၆၉ ဦးထိရှိပြီး နောက်ဆုံးဖြစ်ပွားသူ တစ်ဦးမှာ India နိုင်ငံမှ ပြန်ရောက်လာသူဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ လူနာမှာလည်း ယခုအခါ ဆေးရုံမှ ဆင်းသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
Reference: The Voice Weekly Journal Vol.6/No.11
Posted by ဇီဝက (ဆေး-၂)0comments
Labels: Myanmar Health News
မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးသုတေသန ဦးစီးဌာန (အောက်မြန်မာပြည်) မှ ဒေါက်တာ ကိုကိုဇော်ထံသို့ တိုက်ရိုက် Email ပို့ပြီး မေးမြန်းလို့ ရတယ်လို့ News Watch Journal မှာ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ Email လိပ်စာကတော့ zawkzaw@mail.com ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးသုတေသနမှနေ၍ ကျေးလက်နေပြည်သူများအတွက်လည်း မျိုးဆက်ပွားပညာပေး အစီအစဉ်များကို FM လိုင်းများမှနေ၍ ထုတ်လွှင့်ပေးရန် စီစဉ်နေသည်ဟု သိရပါသည်။
Reference : News Watch Journal
Posted by ဇီဝက (ဆေး-၂)3comments
Posted by ဇီဝက (ဆေး-၂) 1 comments
မီဒီယာများတွင် အသင်းဝင်ဆရာဝန်များနှင့် ပတ်သက်၍ မဟုတ်မမှန်ရေးသားဖော်ပြထားသည့် သတင်းဖော်ပြပါက အသရေ ဖျက်မှုဖြင့် တရားဆွဲဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်း (ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာကျော်မြင့်နိုင် က အသိပေးပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်များ အသင်း(ရန်ကုန်)က ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့ တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန် အသင်း(ဗဟို)တွင် ပြုလုပ်သည့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် အထွေထွေ အစည်းအဝေး၌ ၎င်းက ယခုကဲ့သို့ ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။ မီဒီယာတွေ ရေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ရှေ့နေရှေ့ရပ်တွေနဲ့ တိုင်ပင်တဲ့အခါ ဒီလိုမျိုး ဆောင်ရွက်ဖြစ်ဖို့ ရှိလာပါတယ် ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဥက္ကဌက ဆက်လက်ပြောကြားရာတွင် နောက်နောင်ထိုကဲ့သို့ သော ကိစ္စရပ်များ ဖြစ်လာပြီး အဖွဲ့အစည်းသို့ အသင်းဝင်များမှ တင်ပြလာသောအခါတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းအနေဖြင့်ရော မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီအနေဖြင့်ပါ ဆရာဝန်များအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ ဆောင်ရွက်ကာကွယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တတ်နိုင်သမျှ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်သူ အသင်းဝင်ဆရာဝန်များအားလုံး မိမိဘက်မှ ထိန်းသိမ်းရန် လိုသကဲ့သို့ စည်းကမ်းတကျဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ ဖြစ်လာမည့်ကိစ္စများအတွက် ကြိုတင်တွေးဆ ရှောင်ရှားဆောင်ရွက် ရန်လိုကြောင်း၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် လူနာ၏လုံခြုံမှု၊ မိမိ၏ လုံခြုံမှုကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာ အန္တရာယ်ကင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
"တစ်ဖက်က ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာ အသင်းဝင်ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်တာကိုယ်လုံအောင် ထိန်းဖို့ လိုပါတယ်" ဟု ဒေါက်တာ ကျော်မြင့်နိုင်က ပြောကြားသည်။
ဆရာဝန်မှ မဟုတ် မည်သည့်အဆင့်တွင် ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း မိမိအကြောင်း မီဒီယာများတွင် မဟုတ်မမှန်ရေးသားပါက တရားစွဲဆိုနိုင်သည်မှာ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးပင်ဖြစ်ကြောင်း အထက်တန်း ရှေ့နေတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
The Voice Journal Vol.6/No.10 Supplement III မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
အောင်ရတနာဆေးခန်း မှ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူနာသေဆုံးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဧရာဝတီ မှာ တင်ထားတာတွေ့လို့ စိတ်ထဲမှာ ခိုးလိုးခုလုဖြစ်နေတာနဲ့ ဒီစာကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းကို မဖတ်ရှုရသေးသူတွေအတွက် http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/1-news/2391-2010-01-08-12-06-02 မှာ ဖတ်ရှုလို့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော်စာရေးလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် က မည်သူ့ကိုမျှ အပြစ်တင်လိုတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။ စာဖတ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ်စေချင်လို့ပါ။ ဆောင်းပါးမှာပါဝင်တဲ့ အချက်တွေကိုပဲ သုံးသပ်ပြီး ရေးသားပါမယ်။
ပထမဆုံးပြောချင်တာက ဒီ case ဟာ ဧရာဝတီ ကရေးသားသလို မှားယွင်းသော ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် လူနာသေဆုံးရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုလူနာသေဆုံးရတာ က ခွဲစိတ်ရင်း အဆုတ်သွေးကြောထဲမှာ သွေးခဲသေဆုံးတာလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီ သွေးကြောပိတ်တယ်ဆိုတာက နှလုံးသွေးကြောပိတ်သလိုမျိုး တဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရုတ်တရက် ကောက်ခါငင်ကာ ထဖြစ်တတ်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုပါ။ ဖြစ်ရင်လည်း ဘာမှ မလုပ်နိုင်ခင် လူနာသေဆုံးရတာ များပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတောင် မိခင်တွေ သေဆုံးရသောအကြောင်းအရင်းရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ အဆုတ် သွေးကြော ပိတ်တာ ပါဝင်ပါတယ်။ အသက်ငယ်ငယ် ကြီးကြီး မည်သူမဆို diagnosis မရပါက အသက်မမှီနိုင်ပါ။ Diagnosis လုပ်ရသည်မှာလည်း အလွန်ခက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခွဲစိတ်နေတုန်း မေ့ဆေးပေးထားတုန်း ထဖြစ်ရင် အရမ်း မြန်တတ်သောကြောင့် ဆေးမမှီတတ်ပါ။ အသက်ကြီးသူတွေ လှုပ်ရှားမှု နည်းသူတွေ အရိုးခွဲစိတ်ရသူတွေ မှာ ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ချေရာခိုင်နှုန်းက အရမ်းနည်းတဲ့အတွက် ဆရာဝန်တွေက သူ့ကို မခွဲစိတ်ခင် လူနာကို ရှင်းပြတဲ့ အခါမှာ ထည့်ပြီး ပြောလေ့မရှိပါဘူး။ ကျန်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဆေခန်းက ရှင်းပြလား မပြလားတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိပါ။ ထို့ကြောင့် လူနာကသာ အဆုတ်သွေးကြောပိတ်လို့ သေဆုံးရတာဆိုရင် ဒီ case ဟာ လွဲမှားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် သေဆုံးရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခွဲစိတ်ကုသရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာ ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ ရှောင်လွှဲလို့ မရတဲ့ အခြေအနေ တစ်ခုပါ။
အဲဒီတော့ မခွဲရင်ကောလို့ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ အရိုးကျိုးပြီး အထဲမှာ သွေးဘယ်လောက်ထွက်သလဲ ဆိုတာကို မသိနိုင်တဲ့အတွက် ပြော၍ မရပါ။ သို့သော် မခွဲဘဲ ထားပါက ထိုအဖွားသည် အနည်းဆုံးအိပ်ယာထဲတွင် တစ်နှစ်ခန့် မလှုပ်ဘဲ ငြိမ်ငြိမ်လေးနေရမည် ဖြစ်သည်။ ဒါတောင် ပြန်ကောင်းဖို့ မသေချာ။ အဲဒီ တစ်နှစ်အတွင်းမှာ အသက်အန္တာရယ်ကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့အထိ ဆိုးရွားတဲ့ ရောဂါတွေ ၀င်နိုင်သေးသည်။ ခွဲစိတ်လိုက်ပါက လျင်မြန်စွာ ပြန်ကောင်းလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါက quality of life ရှုထောင့်ကပြောတာပါ။ ကျွန်တော်သာလူနာဆိုရင်တော့ အသက် ၉၀ ဆိုလည်း ခွဲမှာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ quality ချင်းကွာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တင်ပါးဆုံရိုးကျိုးခြင်းသည် လူနာရှင် ကပြောသကဲ့သို့ အသေးအမွှား ပြဿနာကလေးမဟုတ်ပါ။ Major operation တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ဒေါက်တာဝင်းရှိန်က ဒီ case ကိုသုံးသပ်ပြီးမှ အဲဒီစကားပြောတာလား။ ဒါမှ မဟုတ် တစ်ခြားနေရာမှာ အခြားကိစ္စကိုဆွေးနွေးရင်းနဲ့ ပြောတာလား။ ဘီယာဆိုင်မျာ ဘီယာသောက်ရင်းပြောတာလား ဆိုတာကိုလည်း ထည့်ပြောစေချင်တယ်။ မဟုတ်ရင် ဒီစကားက အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ statement တစ်ခုဖြစ်နေမှာပေါ့။
ဧရာဝတီအနေနဲ့လည်း ဆောင်းပါးကို ဖော်ပြမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဆောင်းပါးက တတ်သိတဲ့သူတွေ ဖတ်ကြည့်ပြီး ဟားစရာကြီး ဖြစ်နေလား ဖြစ်မနေဘူးလားဆိုတာ အရင်သုံးသပ်စေချင်တယ်။ ကျန်းမာရေး ဆေးပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်းပါးရေးမယ်ဆိုရင် validity ကို check မလုပ်ဘဲရေးရင် သတင်းမဖြစ်ဘဲ အတင်းအဖျင်းသာ ဖြစ်နေလိမ့်မည်။ မကောင်းဘူး မကောင်းဘူး ပြောနေပြီး ကောင်းအောင် ကျတော့ ကူညီလိုတဲ့ ဆန္ဒမရှိရင် အလကားပါပဲ။ အဲဒီ ဆောင်းပါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာဝန်တစ်ယောက်က သူ့အမြင်ကို ဧရာဝတီမှာ comment ပေးဖို့ ကြိုးစားတာ လက်မခံဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ထို့အတွက်လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။
Posted by ဇီဝက (ဆေး-၂)9comments
Posted by ဇီဝက (ဆေး-၂)4comments
အမျိုးသမီးများ အသက်ကြီးတာနဲ့ ကလေးရနိုင်စွမ်း နည်းလာတယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်မဟုတ်လဲ သိကြတယ်။ ယောက်ျားတွေလဲ အိုလာရင် ကလေးရဘို့လမ်း နည်းလာတာပါဘဲ။ အသက်ကြီးတာအပြင် ဘာ့လို့ ကလေးမရကြသလဲ။ ခင်ပွန်းဘက်က ချို့ယွင်းချက် ၂ဝ%၊ ဇနီးဘက်က ၄ဝ-၅ဝ% နဲ့ ၂ ယောက်လုံးနဲ့ ဆိုင်တာ ၃ဝ-၄ဝ% ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရှင်းမပြနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကလဲ ၁၅% ရှိပါတယ်။
Assisted reproductive technology (ART) မျိုးပွါး အထောက်အကူပြုနည်း ဆိုတာရှိပါတယ်။ Fertility medication ဆိုတဲ့ ဆေးကူပေးတာပါ။ လိုအပ်ရင် In vitro fertilization (IVF) ဆိုတဲ့ သားအိမ်ပြင်ပနည်းကိုပါ တွဲလုပ်တယ်။ (IVF) ကို ထပ်ချဲ့လုပ်ပေးနည်းတွေကတော့ (OCR, AZH, ICSI, ZIFT) နဲ့ (PGD, GIFT, SSR) အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ အရင်ဆုံး မ-မျိုးဥ ထွက်လာအောင် ဆွပေးရတယ်။ ထွက်လာတဲ့ ဥကို ထုတ်ယူ၊ ဓါတ်ခွဲခမ်းထဲမှာ ကျားသုတ်ပိုးနဲ့ ပေါင်စပ်ခိုင်းပြီး၊ ၄ဝ နာရီ စောင့်၊ နောက် ပေါင်းစပ်ပြီးတဲ့ ဥကို သားအိမ်ထဲ ထည့်ပေးတယ်။ မဒီဒေဝီလို ပါရမီဖြည့်မဲ့ သားအိမ်အငှား လုပ်သူကိုလဲ သုံးနိုင်တယ်။ AIDS ရှိသူတွေ မွေးလာမဲ့ ကလေးကို မကူးအောင်လဲ ဒီနည်း သုံးတယ်။ Embryo transfer လို့ခေါ်တယ်။ ၁၉၇၈ ကတည်းက စသုံးပါတယ်။ ၂ဝဝ၆ အကုန်အထိ US မှာ ဒီနည်းနဲ့ မွေးတဲ့ ကလေးပေါင်း ၅ သိန်းရှိပြီတဲ့။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလဲ ရှိပါတယ်။ မလုပ်စေချင်လို့တော့ မဟုတ်ပါ သိထားဘို့လိုလို့ အကုန်အစင် ရေးရရင် - ကလေး တယောက်မကဖြစ်ခြင်း၊ Ovarian hyperstimulation syndrome မ-မျိုးဥအိမ် ရောဂါတမျိုးရခြင်း၊ သွေးယိုခြင်း၊ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊ အလေးချိန် နည်းလွန်းတဲ့ကလေး မွေးခြင်း၊ ကလေးမှာ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက် ပါခြင်း။
သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ Fertility tourism ဆိုတဲ့ဝေါဟာရ ပေါ်လာရတယ်။ ကလေးရဘို့ ခရီးသွားရတာတဲ့။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ကြာပြီလို့ ကြွားချင်ပါတယ်။ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်၊ ရုပ်ရှင်မင်းသား၊ ဒါရိုက်တာ၊ စာရေးဆရာ၊ ထုတ်ဝေသူ စွယ်စုံရ “ဝင်းဦး” ကို ငယ်သူတွေ သိချင်မှ သိကြမယ်။ သူ့ခေတ်မှာတော့ တယောက်ဆို တယောက်ပါ။ “ပရက်စလေ” ခေတ်ကပေါ့။ သူရေးတဲ့ ဝတ္တုရှည်တပုဒ် ရှိတယ်။ ဇာတ်လိုက်မင်းသား သြစတေးလျ သွားပြီး၊ (မဲလ်ဘွမ်း) မှာနေတဲ့ အင်မတန် ချောလှတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ “တညတာ” ကြုံရဆုံရတယ်။ တညပြီးတဲ့နောက် ဆက်ဆံရေး ကန့်လန့်ကာ အပြီးချ လိုက်လို့ မင်းသားခမြာ လွမ်းရ၊ ဆွေးရတာပေါ့။ လွမ်းခန်း ကောင်းနေတုံး၊ မင်းသမီးက အိမ်ထောင်သည် ဆိုတာကို ဖေါ်ပြလိုက်တယ်။ အိမ်ထောင်သက် ကြာပေမဲ့၊ ကလေးမရဘူးတဲ့။ ကျေကွဲရမှာလား၊ ကျေနပ်ရမှာလား မသိပါ။ ဇာတ်လမ်း အဆုံးမှာ မင်းသားနဲ့ တညတာ ဖူးဇာဆုံအပြီး၊ ဇာတ်လိုက်သမီးက သားလေးတယောက် ထွန်းပေါက်ပါသတဲ့။
အသားအရေတွန့်ခြင်းဆိုသည်မှာ ကျွန်တော်တို့ အသက်ကြီးလာသည့်အခါ အရေပြားတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော အစင်းများ၊ မြောင်းများ နှင့် အချိုင့်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ လူတိုင်းလူတိုင်း ဓမ္မတာ အားဖြင့် အသက်ကြီးလာလျှင် ဖြစ်မည်သာဖြစ်သည်။ အသားတွန့်ခြင်းသည် ရေထဲတွင် အကြာကြီး စိမ်နေလျှင်လည်း ဖြစ်တတ်သည်။ နေလောင်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်း နှင့် အချို့သောဆေးများသည် အသားအရေတွန့်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါသည်။
အသားအရေတွန့်ခြင်းကို လူတိုင်း ရှောင်လွဲ၍ မရပါ။ အသက်ကြီးလာပါက အရေပြားသည် ပါးလာပြီး ပိုမိုခြောက်သွေ့လာကာ ကြုံ့နိုင် ဆန့်နိုင်သော သတ္တိများလည်း နည်းပါးလာပါသည်။ ထို့အပြင် အရေပြား၏ ထိခိုက်ဒဏ်ရာကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်းလည်း ကျဆင်းလာပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်တော့ အရေပြားတွင် အစင်းများ ပေါ်လာပါတော့သည်။ အထက်တွင် ဖော်ပြထားသောအချက်များအပြင် လူတစ်ယောက်၏ မျိုးရိုးဗီဇ သည်လည်း ထိုသူ၏ အသားအရေတွန့်ချိန်ကို လွှမ်းမိုးနိုင်ပါသည်။
အသားအရေတွန့်ခြင်းသည် အသက်ကြီးခြင်းကို ညွှန်းဆိုသောကြောင့် ပညာရှိသကဲ့သို့ တင်စားကြသော်လည်း လူအများစုကတော့ မနှစ်မြို့ကြပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ဒေါ်လာ ဘီလီယံနှင့် ချီသော ငွေကြေးတို့ကို အသုံးချကာ အသားမတွန့်အောင် ကုသနေကြပါသည်။ အချို့ဆေးများက ပျောက်မည်ပြောပြီး ဘာမှ မထူးသော်လည်း အချို့သော ဆေးများကတော့ အနည်းနှင့် အများ ထိရောက်သည်လည်း ရှိကြပါသည်။
အသားအရေတွန့်ခြင်းသည် လူတစ်ကိုယ်လုံးတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော်လည်း နေရောင်ဖြင့် အများဆုံးထိတွေ့သောနေရာများတွင် အများဆုံးပေါ်ပေါက်တတ်ပါသည်။ ထိုနေရာတွေကတော့ -
လက်ဖျံ တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
အသားအရေတွန့်ခြင်းတွင် နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ အပေါ်ယံ အစင်းများ နှင့် အောက်သို့ရောက်သော အစင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ လိမ်ဆေးအများစုသည် အပေါ်ယံတွင် ရှိသော အစင်းများလောက်ကိုသာ သက်သာအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အောက်သို့ ရောက်သော အစင်းများကိုမူ လေဆာ သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်သည့် နည်းဖြင့်သာ ကုသပေးနိုင်ပါသည်။
အသားအရေတွန့်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော အဓိက အကြောင်းအရာများ
ပုံမှန်အသက်ကြီး၍ ဖြစ်ခြင်းမှ အပ အောက်ပါ အချက်များသည် အသားအရေတွန့်ခြင်းကို ပိုမို ဖြစ်ထွန်းစေပါသည်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း - ဆေးလိပ်သောက်ပါက အရေပြားသို့ သွေးစီးနှုန်း နည်းသွားပြီး အရေပြားအိုခြင်းကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ဖြစ်စေပါသည်။
အသားဖြူခြင်း - အသားဖြူပါက နေရောင်ဒဏ်ကို ပိုမိုခံရပြီး အသားတွန့်ခြင်းကို မြန်စေပါသည်။
မျိုးရိုးဗီဇ - အဖေ အမေတို့တွင် အသက်ငယ်ငယ်ကတည်းက အသားအရေ တွန့်တတ်ပါက မိမိတွင် လည်း ထိုသို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက အရေတွန့်နိုင်သည်။
အ၀တ်အစား - ဦးထုပ် နှင့် လက်ရှည် အင်္ကျီ တို့ကို ၀တ်ဆင်လေ့ရှိသူသည် မ၀တ်သောသူတို့နှင့်ယှဉ်လျှင် နောက်ကျမှ အသားတွန့်ပါသည်။
အလုပ်အကိုင်- နေပူထဲတွင် ကြာကြာအလုပ်လုပ်ရသောသူတို့သည် အသားအရေ တွန့်ခြင်းကို စောစီးစွာ တွေ့ကြုံရသည်။
မျက်နှာထား - တစ်ချိန်လုံး ပြုံးနေရသူများ၊ ခဏခဏ မျက်နှာ အမူအရာကို ကစားနေရသူများတွင်လည်း ကြွက်သားများ စောစောစီးစီး အိုမင်းကာ အသားအရေတွန့်တတ်ပါသည်။
အသားအရေတွန့်ခြင်းကို မည်ကဲ့သို့ ကုသနိုင်သနည်း။
Vitamin A နှင့် သူ၏ compound များပါဝင်သော လိမ်ဆေးများ လိမ်းလို့ ရပါသည်။ သို့သော် မိမိအရေပြားနှင့် မတည့်ပါက ဓာတ်မတည့်မှုများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဆေးများ၏ ထိရောက်မှုမှာ မည်သူမှ သေချာပေါက်မပြောနိုင်ပေ။ လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးကွာပေလိမ့်မည်။ အခြားတစ်ယောက်တွင် အဆင်ပြေသော်လည်း မိမိနှင့် အဆင်ပြေချင်မှ ပြောပါလိမ့်မည်။
plastic surgery တွင် မျက်နှာကို ခွဲစိတ်ရခြင်းသည် အဓိက အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ပါဝင်ပါသည်။ ခွဲစိတ်သည့် နည်းပေါင်းများစွာ ရှိသော်လည်း နာမည်ကြီးသော နည်းလမ်းများမှာ Botox ဆေးထိုးခြင်း နှင့် Face Lift ခေါ် အရေပြားကို ခွာကာ ပုံပြန်သွင်းခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ Laser ဖြင့် အောက်ခံအရေပြားကို အသားနု ပြန်တက်အောင် လုပ်သည့်နည်းလည်း ရှိပါသည်။
တကယ်တော့ Botox ဆိုသည်မှာ ဘက်တီးရီးယားမှ တဆင့် ရရှိသော အဆိပ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ လူ၏ ကြွက်သားများကို ပျော့စေပါသည်။ ထိုအဆိပ်ကို မိမိအသားအရေတင်းလိုသော နေရာသို့ ထိုးသွင်းရသည်။ နဖူး နှင့် မျက်စိ ၀န်းကျင်နေရာများသည် ကြွက်သားများ အလုပ်လုပ်လွန်သောကြောင့် အသားတွန့်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုနေရာများကို အဆိပ်ထိုးထားပါက ကြွက်သားများ လျော့သွားပြီး အသားက ချောသွားသလို ဖြစ်သွားလေသည်။ ထိုဆေးသည် အရေပြားထဲတွင် ၃ လခန့်သာ ခံသောကြောင့် ထပ်ခါထပ်ခါထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။
Face Lift ကို ဆေးပညာအရ rhytidectomy ဟု ခေါ်ပါသည်။ မိမိ၏ မျက်နှာ အပေါ်ယံအရေပြားကို ဆွဲခွာလိုက်ပြီးနောက် မလိုသည်များကို ဖယ်၊ လိုချင်တာကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ပုံပြန်သွင်းပြီး မျက်နှာကို နုပျိုသကဲ့သို့ ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါခွဲပြီးပါက ၅ နှစ်မှ ၁၀ အထိ ခံပါသည်။ ခွဲပြီးပါက မျက်နှာသည် ခွဲစိတ်သည့်ဒဏ်ကြောင့် ဖူးယောင်နေတတ်ပြီး ရက်သတပတ် အနည်းငယ်ကြာမှ နဂိုအတိုင်း ပြန်ဖြစ်လာမည် ဖြစ်သည်။
အသက်တွေ ကြီးမလာအောင် ကျွန်တော်တို့ လုပ်လို့ မရသေးပါ။ လူတိုင်းလူတိုင်းတော့ တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်တွင် အသားအရေတွန့်မည်သာဖြစ်သည်။ သို့သော် အောက်ပါ အချက်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် အချိန်မတန်မီ အသားအရေတွန့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
အရေပြားနှင့် နေရောင်ခြည် - အရေပြားသည် နေရောင်ဖြင့် ထိတွေ့ချိန်ကြာလေလေ ပျက်စီးလေဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နေပူထဲသို့သွားပါက ဦးထုတ်၊ ထီး နှင့် နေလောင်ဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးသော လိမ်ဆေးများကို လိမ်းသင့်သည်။ သို့သော် ပုံမှန် အသားအရေရှိသော မြန်မာလူမျိုးများအတွက် မဆိုလိုပါ။ အလွန်အမင်းအသားဖြူသူများကို ဆိုလိုပါသည်။
Moisturizers - ၎င်းတို့သည် အသားတွန့်ခြင်းကို မကာကွယ်ပေးသော်လည်း သိပ်ပြီး မသိသာအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း - လုံးဝ ရှောင်သင့်ပါသည်။
အိပ်ရေ၀ခြင်း - တစ်နေ့ကို အိပ်ချိန် ၇ နာရီ ခန့်ရှိသူများသည် ကိုယ်ပိုင်း စိတ်ပိုင်း ပိုမို ကျန်းမာသလို အရေပြားလည်း ပိုမို နုပျိုသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
Original Author - Christian Nordqvist
Translated by - ဇီဝက (ဆေး-၂)
Reference : www.medicalnewstoday.com/articles/174852.php
ရှေးဟောင် ဂရိပန်းပုလက်ရာ Polyclitus, Marathon Youth, Hermes တွေကို ကြည့်ကြည့်၊ (ရီနေဆန်) ခေတ်က Michelangelo နဲ့ Donatello တို့ရဲ့ Statue of David ရုပ်ထုတွေကိုဘဲ ကြည့်ကြည့် ကျားလိင်အင်္ဂါကို ခပ်သေးသေးသာ ထုဆစ်ထားတာ တွေ့ရပါမယ်။ ဒီခေတ်မှာ ယောက်ျားတယောက်ဟာ ကိုယ့်အင်္ဂါကိုယ် ပြန်ကြည့်ရင် သူများတွေထက် သေးနေသလို ထင်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အပေါ်ကနေ မိုးကြည့်ရတာကိုး။ စိုးရိမ်သူများ ဆရာဝန်ဆီ ရောက်လာလို့ သူတို့ကို စနစ်တကျ တိုင်းထွာတဲ့အခါမှာ ပုံမှန် အရွယ်အစား ဖြစ်နေကြတာ များတယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။
ခက်နေတာက ဘာမဆို ကြိုက်သလို ပြုပြင်လို့ရတဲ့ Image manipulation ခေတ်ဖြစ်လေတော့ ကြည့်တဲ့သူတွေအဖို့ လှလိုက်တာ၊ ကောင်းလိုက်တာ၊ ကြီးလိုက်တာ၊ စတာတွေဟာ တကယ်ဘဲလို့ ထင်မှတ်စေတယ်။ အမှန်က Illusion ထင်ရောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင် Deception လှည့်စားတာတွေပါ။ ဒီတော့ အရင်ပေါ် CRT နောက်ပေါ် TFT-LCD (မော်နီတာ) တွေကို မကြည့်ဘဲ ပြဒါးသုတ် ကြေးမုံမှန်ကိုသာ ကြည့်ဘို့ အကြံပြုပါတယ်။
ကျားဖြစ်ဖြစ်၊ မဖြစ်ဖြစ် လူကို အပြင်ပမ်း အင်္ဂါရုပ် ကြည့်ပြီး၊ မွေးရာပါအင်္ဂါက ဘယ်လိုနေမယ်လို့ မှန်းဆပြီး၊ တိုးတိုး တိတ်တိတ် ပြောလေ့ရှိတဲ့ ပေါ်ပြူလာ ယဉ်ကျေမှုက ရှိသေးတယ်။ သုတေသန လုပ်ကြည့်တော့ ဒီလိုမှန်းဆချက်တွေဟာ မတိကျဘူး ဆိုတာသိရတယ်။ ကိုယ့်ကို ကောင်းတာပြောတာ မဟုတ်ရင် မယုံကြပါနဲ့။
ကျားလိင်အင်္ဂါရဲ့ အရွယ်အစားဟာ အသက်နဲ့လဲ ဆိုင်တယ်။ မွေးကာစ Flaccid penile က4cm ရှိပြီး၊ လူပျိုပေါက်မှာ သိသိသာသာ ရှည်လာတယ်။ အရွယ်နဲ့အမျှလဲ တိုးတက်မှု ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက်ကြီးသူတွေကို သုတေသန လုပ်ကြတော့ တချို့က သေးသွားတယ်ပြောသလို၊ တချို့က ပိုကြီးလာသတဲ့။ သုတေသနတိုင်းကိုလဲ အားမကိုးရပြန်ဘူး။
“ဒါး”နဲ့ စပြောပါမယ်။ ခွဲစိတ်ပြုပြင်နည်း။ Penis lengthening (Enhancement Phalloplasty) နဲ့ Penis widening (Girth Enhancement) ဆိုတာတွေ Urologic literature ထဲမှာ ပါနေပါတယ်။ ခွဲစိတ်-ခန္ဓာဗေဒအရ ကျားလိင်အင်္ဂါရဲ့ သုံးပုံတပုံ ကနေ တဝက်လောက်ဟာ ကိုယ်အတွင်းထဲက ဆီးစပ်ရိုးအောက်ခြေမှာ တွယ်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအပိုင်းကို အပြင် ရောက်လာအောင် Fundiform ligament နဲ့ Suspensory ligament အရွတ် ၂ ခုကို ခွဲစိတ်ပြီး၊ အပြင်ကို ထုတ်ပေးတာပါ။ တခုက ကောက်နေအောင် ဆွဲပေးထားခဲ့တာမို့ ဖြတ်လိုက်ရင် ဖြောင့်ပြီး၊ 2-3cm (0.78-1.18 in) ပိုရှည် လာစေတယ်။ ဒါပေမဲ့ လန်ဒန် St. Peter's Andrology Centre and Institute ကနေ ခွဲစိတ်ကုသခံသူ လူနာ အများစုဟာ သိပ်ကြေနပ်မှု မရှိကြကြောင်း၊ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
နောက် ခွဲစိတ်နည်း တခုကတော့ Dermal implant ခေါ်တယ်။ Fat cells တွေကို Transplant လုပ်ပေးတာပါ။ နောက် တနည်းကတော့ Inflatable implants ဖေါင်းစေတဲ့ပစ္စည်း ထည့်ပေးတဲ့နည်းပါ။ ဒီနည်းကို ပန်းသေနေသူတွေအတွက် လုပ်ပေးတာပါ။ စပေါ်တော့ အမှတ်ရသေးတယ်။ Time International မဂ္ဂဇင်းမှာတောင် ပါခဲ့သေးတာ။ Penis pump ဆိုတဲ့ ဆလင်ဒါလို လေဟာနယ် ကရိယာလည်း ရှိတယ်။ ပန်းညှိုးသူတွေအတွက် လုပ်ပေးတာပါဘဲ။ Clamping နည်း၊ Stretching and hanging နည်းလဲရှိတယ်။ တခြားနည်းတွေကိုတော့ လေးစားခံရတဲ့ ဆေးပညာ အသိုင်းအဝိုင်းက အသိအမှတ် မပြုပါ။ ဒီအထဲ မပါတာဆိုရင် ဘေးချိတ်ပေါ့ဗျာ။
“ဒါး”ပြီးတော့ “လက်” လာမယ်။ (အက်တာနက်) မှာ Penis enlargement pills, Penis patches, Ointments တွေ အမျိုးမျိုး ကြော်ညာနေတယ်။ Spam email messages တွေထဲမှာ အများဆုံးပါဘဲ။ အမိုင်နိုအက်စစ်တမျိုးကို Lotion for men လိမ်းဆေးအဖြစ် သုံးကြတယ်။ Andractim DHT Gel - DHT (Dihydrotestosterone) ဆိုတာက Testosterone ကို အားကောင်းအောင် လုပ်ထားတဲ့ လိမ်းဆေး။ Micropenis လို ဖြစ်နေသူတွေအတွက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ Flora Research of California နဲ့ University of Maryland တို့ကနေ အဲဒါတွေမှာ (mold, yeast, E. coli bacteria, pesticides, and lead) အန္တရာယ် ပေးတဲ့အရာတွေ အများကြီး ပါတယ်လို့ ရေးပါတယ်။
ဆေးဝါးတွေနဲ့စာရင် လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာက ဘေးထွက်ဆိုကျိုးကို မစိုးရိမ်ရပါ။ ဒါ့ကြောင့် Jelqing Technique နည်းဆိုတာ ဘာသာပြန်ရေးရရင် - ရေနွေးချိုးပါ၊ ရေနွေးဝတ်သုံးပါ။ ပိုးသန့်တဲ့ ဆီတခုခု လိမ်းပါ။ အရင်းကနေ အဖျားဆီ လက်တဖက်နဲ့ ခပ်တင်းတင်း ကိုင်ပြီး၊ ဆွဲချပေး။ လက်ကိုလဲ ဘယ်-ညာပြောင်း၊ ၁၅ကြိမ်လုပ်ပါ။ သန်မာလာတာကို ၂ဝ-၄ဝ% အထိသာ ဖြစ်လာပါစေ။ ပိုမသွားအောင် နားပါ။ ဆီ ဆိုရာမှာ အိန္ဒိယဆိုရင် မုံညင်းဆီ၊ မြေထဲပင်လယ်ဒေသမှာဆို သံလွင်ဆီ စသဖြင့် သုံးတယ်။ သူတို့အရပ်မှာ ပေါတာတွေကိုး။ ဗမာပြည်မှာ နှမ်းဆီ၊ အုံးဆီ၊ ကြက်ဆူဆီ စတာတွေ သုံးနိုင်ပါမယ်။ ဒီကိစ္စအတွက် သီးသန့်ခွဲထားပေါ့။ မဟုတ်ရင် မှိုရောဂါဝင်တတ်တယ်။ ပြီးရင် ဆပ်ပြာနဲ့ ကောင်းကောင်း ဆေးကြောပါ။
15th - 25th Feb, 2010
The Conference will provide an opportunity for participants to shareinsights and experiences and to network with other colleagues from voluntary sectors, health, education, local authorities and other areas. It is also an opportunity to getadirect access to loans and grants.
Keynote speaker, Professor Sir Michael Marmot, chairman of the World health organization Other speakers include: Dr. Fiona Adshead, Deputy Chief Medical Officer of England and Director of Health improvement.
*Women and Gender equality.Side Attractions:
Members of NGOs, Health Practitioners, Professionals in relevant fields, Lawyers, Psychologists, Women and Youth Development Groups, Government Officials, Donor Agencies, distinguished theologians,scholars and academics, ecumenists, members of peace and reconciliation groups and prospective individuals.
The Dylans Foundation and its co- sponsors have set up an Access Fund to support the travel costs (International Travel and local transportation cost) for all qualified participants. This is will onafirst come-first-serve policy as we are envisioning
Phone No: +447031852034
If you wish to presentapaper at the conference, you should submitasingle-spaced one-page presentation abstract, curriculum vitae (less than4pages), and presentation application form, which will be sent on request. commission on the social determinants of health.
H1N1 ပြန်လည်ခေါင်းထောင်လာသည့်အတွက် လူအများ လက်ကို စနစ်တကျဆေးကြရန် လိုအပ်လာပါသည်။ နည်းမှန်လမ်းမှန် လက်ဆေးနည်းကို ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ လက်ဆေးခြင်းဖြင့် တုတ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ကြပါစို့။
Labels: Health behavior
Posted by Dr. Tint Swe 18 comments